Naakhuude Germany ah oo ka codsadey R/wasaaraha Germany in gacan laga geysto sidii looga furdaamin lahaa Burcad badeed. [Akhris …] – Radio Daljir
Naakhuude Germany ah oo ka codsadey R/wasaaraha Germany in gacan laga geysto sidii looga furdaamin lahaa Burcad badeed. [Akhris …]
Berlin, July 05- Kabtanka Markabka nooca shixnadaha qaadaha oo ay afduub ugu heystaan xeebaha dalka Soomaaliya koox Burcad badeed ah ayaa waxaa uu ka codsadey Chancellor-ka dalka Germany Angela Markel in ay faragelin ku sammeyso haysashadooda.
Captain Hansa Stavenger ayaa waxaa uu sheegey in shanta shaqaalaha ah ee u dhalatey dalka Germany ee lagu afduubtey Markabka in xaaladdooda ay aad u liidato halka qaarna uu dhinacooda dhulka yaal.
Warqad E-mail ah oo uu u soo qorey Wargeyska lagu magacaabo Der Speigal ee toddobaadkiiba maalin soo baxa ayaa waxaa uu Mr Hansa Stavenger uu kaga codsadey dawladda Germany in ay ka qayb qaadato soo siideyntooda si ay u dhammaato cayaarta waallida ah waa sida uu hadalka u yiriye.
Afhayeen u hadley Wasaaradda Arrimaha dibadda ee Germany ma uusan caddeyn warqadda ay ka timid iyo in kale shaqaalaha saran Markabka hase yeeshee waxaa uu qirey in la sammeynayo dadaal deg deg ah oo lagu bad baadinayo nolosha dadka.
Sida uu wargeyska soo xigtey isku day lagu soo sii deynayo Markabka iyo shaqaalaha Saaran ayaa waxaa uu noqdey mid aan waxba ka hirgelin, kaddib markii ay codsadeen kooxda Burcad badeedda ah in la siiyo adduun gaaraya Lixmalyuun oo Doollarka Marreykanka ah.
4 Bishii April ayeey ahayd markii afduub ay u geysteen koox Burcad badeed Soomaali ah Markabkan, illaa iyo iminkana ma muuqato dadaallo ay waddo dawladda Germany oo ay ku soo furdaamineyso Markabkan iyo shaqaalaha Saaran.
Markabkaan ayaa waxaa ay ka afduubteen koox Burcad badeed Soomaali ah meel u jirta badda Soomaaliya 400 Nautical Mile, waxaana uu sidey 20,000 oo Tan waxaana laga afduubtey meel u dhaxeysa badda waddamada Seychelles iyo Kenya.